समाचार विश्लेषण | गणेश कार्कीको ब्लग
Posted on May 8, 2011 by नेपाली मुटु
आफ्नो लागि आफैले केहि गर्नु पर्छ । आफ्नो क्षेत्रका लागि आफैले नगरे अरु कसले गर्छ ? यही विचारलाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नो ठाउँको विकाशका लागि नयाँ नयाँ तरिकाकामा गरिएका सामूहिक प्रयासहरु प्रशस्त छन् । गर्नलाई त हाम्रो देशमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा लिपिबद्ध गरिएको धेरै नै भइसक्यो । तर यो कति कागजी मात्र छ भन्ने कुरा हामीले दैनिक जीवनमा महसुस गरिआएकै छौ । यद्यपी शिक्षाको आवश्यकता भने सबैले महसुस गर्न थालिसकेका छन् । यस्तै शिक्षाको लागि सरकारको मुख नताकि स्थानिय प्रयासमा स्याङ्जामा एक विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि उनीहरुको मुख्य स्रोत हो, कुखुरा, हाँस, परेवा र बोकाको टाउको बिक्री ।
//interstitial adclicksor_enable_inter = true; clicksor_maxad = -1; clicksor_hourcap = -1; clicksor_showcap = 2;//connect widgetclicksor_adhere_opt = ‘left:50%’;//default pop-under house ad urlclicksor_enable_pop = true; clicksor_frequencyCap = -1;durl = ”;//default banner house ad url clicksor_default_url = ”;clicksor_banner_border = ‘#3d3d3d’; clicksor_banner_ad_bg = ‘#e0e0e0’;clicksor_banner_link_color = ‘#000000’; clicksor_banner_text_color = ‘#666666’;clicksor_banner_image_banner = true; clicksor_banner_text_banner = true;clicksor_layer_border_color = ”;clicksor_layer_ad_bg = ”; clicksor_layer_ad_link_color = ”;clicksor_layer_ad_text_color = ”; clicksor_text_link_bg = ”;clicksor_text_link_color = ‘#141414’; clicksor_enable_text_link = true;
&amp;lt;a href=”http://www.yesadvertising.com”&amp;gt;affiliate marketing&amp;lt;/a&amp;gt;
विद्यालय चलाउँने तरिका धेरै हुन्छन् । कतै तरकारीलाई आम्दानीको स्रोत मानेर त कतै व्यक्ति वा संस्थामार्फत खर्च जुटाएर अनि कतै महायज्ञ सञ्चालन गरेर । तर स्याङ्जाको चित्रे भञ्ज्याङ गा.वि.स.मा रहेको एक विद्यालयमा भने मन्दिरमा देवीदेउतालाई चढाएको बलीको टाउको बेचेर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
नजिकै रहेको बाल सुर्योदय प्रा.वि.मा सरकारी तहबाट आएको बजेटले मात्रै विद्यालयको खर्च धान्न नसकेपछि त्यहाँका स्थानिय वासिन्दाले यस्तो उपाय अपनाएका हुन् । विद्यालय नजिकै रहेको भैरवस्थान मन्दिरमा बलि चढाउँन ल्याएका बोका, कुखुरा, परेवा र हाँसका टाउका बेचेर आएको केहि आम्दानी विद्यालयलाई दिने गरेको मन्दिरका संरक्षक मनुभक्त शर्मा बताउँनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार २०५४ सालमा स्थापना भएको सो विद्यालयलाई द्धितिया, पञ्चमी, दशमी र पुर्णिमाका दिनका बलिका टाउका समितिले बेचि आधा पैसा विद्यालयलाई दिने गरिएको छ ।
मन्दिरमा आफ्नो मनोकांक्षा पुरा गरिदिएको भन्दै बलि चढाउँन आएकाले ल्याएको विभिन्न पशुपंक्षीका टाउका दर्शनार्थीले चढाएको भेटीले विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ ।
सो मन्दिरमा दैनिक सय भन्दा बढि दर्शनार्थीहरुले बलि चढाउँने गर्छन् । सो बलि मध्ये कुखुरा, हाँस र परेवाको टाउको प्रतिगोटा २० रुपैया र बोकाको टाउको ८० देखि १०० रुपैयामा बेचिन्छ ।
यसरी प्राप्त रकमबाट दुइजना शिक्षक निजीस्रोतमा राखिएको छ ।
नेपाल एफ् एम् को सहयोगमा
Filed under: अलगधार, समाचार विश्लेषण |	Leaveacomment »
सबै तथ्यहरु समाचार बन्न सक्दैनन् । झट्ट सुनेको भरमा या प्रभावका भरमा समाचार प्रकाशित गर्दा कतिको प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यसको उदाहरण डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणको समाचार होस् या भर्खर मात्र चर्चामा आएको अनुजाको ९१ लाख काण्ड नै काफी छ, जुन हाम्रो अगाडि ऐना सरि उभिएको छ । यसले वास्तवमा प्रकाशकको विश्वसनियता घटाएको छ । हचुवाका भरमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा यसले प्रत्रिकाको विश्वसनियता घटाउँने मात्र होइन, समाजमा समेत नकारात्मक असर पर्दछ । यसकारण समाचारले समाजमा पार्ने असर विचारेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्नु पर्दछ । तर भर्खर मात्र अनुजा प्रकरणमा गल्ति गरेर माफी मागेको कान्तिपुरले पुन समाजलाई पछाडी धकेल्ने कुप्रथालाई प्रश्रय दिदै बैशाख २५ गतेको अंकमा कुनै सकारात्मक कदमको प्रशंसा गरे झै समाचार प्रकाशित गरेको छ । हेर्नुहोस् पुरा समाचार
दाइजो प्रथा नेपाली समाजको भयानक विकृतिको रुपमा रहेको छ । अझ तराइमुलका नागरिकहरुमा यो कुप्रथा अझ व्यापक र गहिरो छ । दाइजो थोरै ल्याएको वा नल्याएको भन्दै महिलाहरु मारिने क्रम जारी छ । यही दाइजो प्रथाका कारण कतिपय नारीहरुको जीवन नरकतुल्य बनाएको छ । तर यही प्रथालाई प्रश्रय मिल्ने गरि कान्तिपुर द्धैनिकमा आज बैशाख २५ गतेको अंकमा यस्तो समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=”http://www.yesadvertising.com”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;affiliate marketing&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
समाचारमा संवाददाता अहिलेको विवाहमा जिन्सी उपहार लानु नपरेकोले खुब सजिलो भएको बताउँछन् । साथै उनले दाइजोमा सेयर दिनु निकै ठुलो कामका रुपमा प्रमाणित गर्न तथ्य प्रस्तुत गर्दछन् ।
वास्तवमा दाइजो प्रथा निर्मुल गर्न कानुनी रुपमा मात्र नभए सामाजिक रुपमा पनि निकै कामहरु भइरहेका छन् । दाइजो प्रथालाई कुप्रथाका रुपमा व्याख्या गर्न कुनै कानुनी धाराको वर्णन आवश्यक छैन । यसलाई हाम्रै घरसमाजमा हेरे पुग्छ । यो अमानविय प्रथालाई रोक्न सबै जागरुक हुनु पर्ने हो । तर त्यसको विपरित दाइजोका रुपमा जिन्सी सामान नदिएर अझ सेयर दिन उक्साउँने खालको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित हुनु खेदपुर्ण छ ।
Filed under: नोट अफ डिसेन्ट, समाचार विश्लेषण |	2 Comments »
Posted on May 6, 2011 by नेपाली मुटु
अन्तत: अलकायदाले अमेरिकाका राष्ट्रपति ओबामाले लादेन मारिएको खबर संसारलाई दिएको छैटौं दिन अलकायदाले ओसामा मारिएको पुष्टि गरेको छ । ओसामा मारिएको बारेमा संसारभर नै द्धिविधा रहेको थियो तर आज अलकायदाले यो द्धिविधा हटाएको छ । उसले यो पुष्टिसँगै अमेरिकीहरुको यो खुसी दुखमा परिवर्तन हुने चेतावनी पनि दिएको छ । अलकायदा सम्बद्ध एउटा साइटबाट उसले आफ्ना नेता मारिएको पुष्टि गरेको हो । त्यसमा बताए अनुसार दोस्रो वरियताका अल जवाहरीले अलकायदा प्रमुखको जिम्मेवारी लिन सक्नेछन् ।
यो समाचारको स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ । तर पनि यो सुचनालाई पहिले अलकायदाले आफ्नो सुचना जहाँ राख्थ्यो त्यही नै राखिएको छ । यसैले पनि यो पुष्टि आधिकारिक हुने सम्भावना अधिकतम छ ।
उसले भनेको छ, “आफ्ना जिहादी नेताको रगतलाई त्यसै खेर फाल्ने छैन । पहिले जसरी नै अमेरिका र उसका सहायकलाई निसाना बनाइने छ ।”
संसारभर लादेनको मृत्युको बारेमा द्धिविधा रहेपनि चाँडै नै लादेनको शवको तस्विर सार्वजनिक नगर्ने अमेरिकाले निर्णय गरेको थियो । यो तस्विरबाट अमेरिकीहरुलाई नै अफ्ठ्यारो पर्ने उसको धारणा छ । तर अब उसले लादेनको मृत्युको पुष्टि गर्न नै भनेर तस्विर सार्वजनिक गर्नु पर्ने छैन ।
Filed under: समाचार विश्लेषण |	2 Comments »
Posted on May 4, 2011 by नेपाली मुटु
अन्तत: ठ्याक्कै तिन महिना पछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गृहमन्त्रालयको भार बिसाएका छन् । चौथो पटकको विस्तारमा उनकै मन्त्रीमण्डलका सुचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्ण बहादुर महरालाई गृह दिएर उनले भारी बिसाएका हुन् । योसँगै उनको सानो बनाउँने भनिएको मन्त्रीमण्डल ३२ जनाको भइसकेको छ । फोरम र नेकपा मालेले एक(एक मन्त्री पठाउनै बाँकी छ भने माओवादीले ६, एमालेले तीन र फोरमले तीन राज्यमन्त्री पठाउन बाँकी छ । उसो त सरकारमा सहभागी अन्य तीन साना दलले पनि कम्तिमा एक(एक राज्यमन्त्री माग्ने लगभग पक्का छ । यति धेरै मन्त्री बनाइसके पनि र बनाउँन बाँकी रहेको भएपनि उनका लागि भने आफ्नो प्रमको कुर्सीको भन्दा बढि गृहको भारी थियो । आज यो भारी बिसाएका त छन् तर यसले अझ बबण्डर मच्चाउँने पक्का छ । गृहको विवाद चुलिने कारणहरु यस्ता छन्
एमाले भित्रको विवाद र दवाव
माधव र ओलीले यसअघि नै गृहमा एमालेको तर्फबाट नामै किटान गरेर बिष्णु पौडेललाई पठाए पनि उनले पौडेललाई रक्षा दिएर मत्थर पार्ने कोशिस भने गरेका थिए । यसो गरे पनि माधव ओली पक्षले माओवादीलाई कसैगरे पनि गृह दिन नहुने भनि सार्वजनिक रुपमा दवाव दिएकाले झलनाथ आफैले गृह राखेका थिए । तर सबै दवावलाई बेवास्ता गर्दै आज झलनाथले गृह माओवादीलाई दिएका छन् ।
यसअघि आलोचनाबाट बँच्न केन्द्रिय कमिटिको बैठक स्थगीत गरे पनि ओली बिदेश गएको मौका पारेर बिहिबार केन्द्रिय कमिटिको बैठक बोलाएका छन् । तर सरकारको कार्यशैलीप्रति दिक्क भएको र माओवादीको कुरामात्र सुनेको भनेर अहिले उनकै पक्षका सदस्य पनि उनी प्रति सन्तुष्ट छैनन् । यसैले ति सबैको तातो रिस बिहिबारको केन्द्रिय कमिटिमा पोखिने पक्का छ । माओवादीलाई गृह दिए झलनाथसँग हिसाबकिताब हुन्छ भनेर सार्वजनिक चुनौति दिएका केपी ओली र उनका पक्षधरले झलनाथको राजिनामा माग्ने स्थिती बन्ने सम्भावना पनि कायम छ ।
यदि साँच्चै नै ओली पक्षधर हावी भए पार्टीमा चरम गुटबन्दी देखिने र यसबाट जे पनि हुन सक्ने स्थितीको आंकलन गर्न गार्हो छैन ।
माओवादीमा पनि कम छैन विवाद
प्रचण्डले बर्षमान पुनलाई गृह मन्त्री बनाउँन चाहे पनि उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले देव गुरुङ्गलाई अघि सारे । जसबाट माओवादीमा गृहको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । न तेरा न मेरा भन्ने स्टाइलमा अन्तमा प्रचण्डले कृष्णबहादुर महरालाई गृहका लागि सिफारिस गरे । जसको कारण पुनले शान्तिमन्त्रीबाट राजिनामा दिइसकेका छन् ।
Filed under: समाचार विश्लेषण |	3 Comments »
यो कल्पनामा आधारित छ
ओसामा बिन लादेनको मृत्युमा अझै पनि शंका गर्नेको संख्या निकै ठुलो छ । कतिले त अमेरिकी र पाकिस्तानी जासुसी संस्थाको कारणले भएको ट्विन्स टावर आक्रमणमा लादेन मोहोरा मात्र भएको भन्दै अब मोहोराको काम नभएर जानाजानी लादेनलाई मरिसक्यो भनेर लुकाएको पनि बताइरहेका छन् । यो पब्लिसिटी स्टन्ड मात्र पनि हुन सक्छ । जे भएपनि ओसामाको मृत्युमा शंका गर्ने अझै बाँकी छन् भन्नेकुराको यसले पुष्टि भने गर्दछ । ओसामाको मृत्युलाई धेरैले स्पाम फैलाउँने आधार बनाएको तपाईलाई थाहा छ, छैन । अहिले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालका वेभसाइटहरुमा लादेनको मृत्युको भिडियो भनेर लिंकहरु छ्यास्छ्यास्ती भेटिन थालेका छन् । अमेरिकाका केहि अधिकारीहरुले पनि ओसामाको मृत्युको भिडियोको सार्वजनिकरण गर्ने बारेमा केहि बताएका छन् । लादेनको मृत्युको भिडियोको सत्यता भने यस्तो छ
सामाजिक सञ्जाल साइटमा ओसामाको मृत्युको भिडियो
लादेनको मृत्यु हुने बित्तिकै देखि कतिपय सामाजिक सञ्जालका साइटहरुमा लादेनको भिडियो हेर्ने हो ? भनेर लिंक दिने गरेका छन् । ति लिंकहरुमा विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको, सीएनएनको भिडियो भन्दै प्रमाणित गर्ने कोशिस पनि गरिएको हुन्छ । तर ति सबै फेक हुन् । यसबारे थप बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नु होला ।
बिन लादेन मारिएको एनिमेटेड भिडियो
हिजो धेरै साइटहरुले लादेनको मृत्युको एनिमेटेड भिडियो बनाएर आफ्नो साइटमा राखेका थिए । त्यस्ता भिडियोहरु watch laden death, laden death video, killed usama, killed osama, video of osama death जस्ता नाम दिएर राखिएका छन् । त्यसमध्ये हिजो खुबै हेरिएको यो भिडियो यहाँ राखिएको छ । यसलाई ताइवानको एनएम टिभीले बनाएको हो ।
अमेरिकाले के भन्छ
ओसामाको मृत्युदेखि अन्त्येष्टिसम्मको भिडियो ह्वाइट हाउससँग सुरक्षित रहेको भने पुष्टि भइसकेको छ । तर यसलाई सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने अमेरिकाले अझै धारणा बनाउँन सकेको छैन । कुनै पनि अमेरिकी अधिकारीहरु यसबारे प्रस्ट रुपमा बताउँन चाहादैनन् सक्दैनन् । यसैले भिडियो बारे अहिले नै केहि भन्नु हतार हुन सक्छ । तर अमेरिका लादेनको मृत्यु भइसकेको पुष्टि गर्न चाहान्छ । लादेनको मृत्यु बारे अलिकति पनि शंका नराख्नका लागि उसले निकट भविष्यमा भिडियो सार्वजनिक गर्न सक्छ । तर त्यो बिशेष सतर्कताका साथ हुनेछ । मुख्य अंशहरु छाँटकाँट गरेको भिडियो निकट भविष्यमा हेर्न सकिने सम्भावना छ ।
Posted on May 3, 2011 by नेपाली मुटु
द सनले आज निकालेको एनिमेटेड तस्विर
अमेरिकाका लागि लादेनको मृत्युको महत्व कति थियो भन्ने कुरा अब थप प्रस्ट हुँदै छ । संसारभरका मिडियाहरु लादेनको मृत्युको नयाँ नयाँ कोणबाट अध्ययन गरिरहेका छन् । आजै मात्र द सन् ले जनाए अनुसार ओबामाले लादेनलाई मार्न गरिएको आक्रमणको लाईभ भिडियो हेरेका थिए । लादेनलाई मार्न गएको अमेरिकी सेनाको विशेष समूहले आफ्नो टाउकोमा क्यामेरा जडान गरेका थिए, त्यही क्यामेराबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको दृश्य ओबामा र उनका निकट सहयोगीहरुले हेरेका रहेछन् । यसरी हेरेका थिए ओबामा र उनका सहयोगीहरुले मृत्युको त्यो दर्दनाक दृष्य
द सनले सन्दर्भमा आधारित भएर आज निकालेको थप केहि एनिमेटेड तस्विरहरु
ओबामा र उनका सहयोगी भिडियो हेर्दै, हिलारी त्रसित
यसरी भएको थियो आक्रमण
पाकिस्तानको अब्बोत्ताबादमा १० लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा बनेको एउटा तीन तल्ले घर थियो। निकै सुरक्षा अपनाइएको। अमेरिकी जासुसी एजेन्सी सीआइएलाई चार वर्षअघि नै त्यो घरबारे शंका लागेको थियो।
त्यो घरमा फोन र इन्टरनेटको लिङ्क छैन भन्ने थाहा पाएपछि त सीआइए झनै शंकालु बन्यो। आफू कहाँ बसेको हो स्याटेलाइटले ट्र्याक गर्छ भनेर होला बिन लादेनले यस्ता विद्युतीय सञ्चार चलाउँदैन थिए।
घरमा बस्ने बिन लादेनै हो भन्ने निधो भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यहाँ आक्रमण गर्ने निर्देशन दिए। सुरुमा त त्यहाँ बम खसाउने कि भन्ने कुरा भएको थियो। तर बम हान्दा बस्तीका अरु पनि मर्न सक्ने भएकोले स्थल कारबाही गर्ने निर्णय भएको रहेछ।
आक्रमणको आदेश पाएपछि चार वटा नाइटभिजन हेलिकप्टर उडे बिन लादेन बसेको घरमाथि। दुई दर्जन अमेरिकी एलिट स्पेसल फोर्सका सैनिक हेलिकप्टरको डोरीबाट घरको छतमा झरे। भिडन्त भयो। उनीहरु लादेन बसेकै कोठामा पुगे। एक अरबी भाषा जान्ने सैनिकले आत्मसमर्पण गर्न भने, तर उनले मानेनन्। उनी आफ्नी पत्‍नीको पछाडि गए, मानव ढाल बनाउने प्रयास थियो त्यो उनको। उनी थिइन् लादेनकी कान्छी स्वास्नी २७ वर्षकी यमनमा जन्मिएकी अमल अहमद अल सदाह।
एक सैनिकले प्वाइन्ट ब्ल्याङ्क रेन्जमा दुई आँखाको बीचमा गोली हाने। अर्को गोली उनको छातीमा लाग्यो।
सब दृश्य हेरिरहेका थिए ओबामाले ह्वाइट हाउसमा ती सैनिकको हेल्मेटमा भएको क्यामेराबाट। लादेन मारिएपछि ओबामाले ‘वि गट हिम’ भनेछन्।
४० मिनेटमा काम तमाम गरेर लादेनको शव लिएर उनीहरु फर्किए।
शव लादेनको प्रमाणित भएपछि ओबामाले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे।
लादेनको शवमा गह्रुँगा ब्याग बाँधियो र समुद्रमा छाडियो। अन्त्येष्टि सम्पन्न। र, लादेनलाई समाप्त गर्ने जेरोनिमो कोड नाम दिइएको अपरेसन पनि सकियो।
Filed under: समाचार विश्लेषण |	5 Comments »
Posted on May 2, 2011 by नेपाली मुटु
बिन लादेन, जतिसमय बाँचे भयानक भएर बाँचे । उनको मृत्यु पनि उस्तै भयानक रह्यो । खास गरि अमेरिकीहरुका लागि र कट्टरपन्थी मुसलमानका लागि उनी एकैसमय राक्षस र देवता थिए । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा उनका समर्थकहरु ट्विन्स टावरमा मानिस मारिएपछि नाचेका दृष्यहरु धेरै समय टिभीका स्क्रिनमा दोहोरिरहे । आज बिन लादेनको मृत्युको खबरले अमेरिकीहरु नाचेको दृष्य उसैगरि दोहोरिरहेको छ, टिभी स्क्रिनमा । कसैको मृत्युमा रमाउँनु पक्कै पनि मानविय होइन । प्रश्न उत्तिकै गम्भिर छन् । के यसले रोक्न सक्ला, पुन कसैको मृत्युमा निस्कने कहालीलाग्दो हासोलाई ? लादेन त मारिए, के रोकिएला मृत्युमा हास्ने कुचक्र ? जसले अर्थ जे लगाएपनि सामान्य मानिसका लागि ति दुबै हासो उत्तिकै भयावह छन् ।
हाम्रो इच्छा यत्ति हो, कसैको मृत्युमा खुसी मनाउँने यो चक्रको अन्त्य होस् । तर के यो सम्भव होला ?
कसरी मारिए बिन लादेन ?
पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादबाट करिब सय किलोमिटर उत्तरमा छ अब्बोत्ताबाद। त्यहाँको बिलाल क्षेत्रमा एउटा घर थियो जहाँ धेरैअघिदेखि जासुसी संयन्त्रले चियो गरिरहेको थियो। तीन तला अग्लो र वरपरका घरहरुभन्दा यो आठ गुणा अग्लो यो घर वरपर १८ फिट अग्लो पर्खालहरु थियो र माथि काँडेतार पनि लगाइएको थियो। त्यहाँ दुई सुरक्षा गेट थिए तर कुनै फोन र इन्टरनेट चलाइएको थिएन।
यही घरमा बसेका थिएन बिन लादेन आफ्नो परिवारसहित। ओबामा प्रशासनले जासुसी जानकारी पाकिस्तानलाई पनि बाँडेको थिएन। अमेरिकी सरकार कै थोरै मान्छेलाई मात्र लादेनलक्षित आक्रमण हुन लागेको बारे थाहा थियो।
त्यहाँ रहेका व्यक्ति बिन लादेन नै हो भन्ने पुष्टि भएपछि ओबामाले आक्रमण गर्न आदेश दिए। चार वटा हेलिकप्टरले आकाशबाट साथ दिएको थियो भने कतिको समूह भनिएको छैन तर सानो अमेरिकी समूह घरभित्र छिरेको थियो। ४० मिनेट भिडन्त भयो। लादेनले प्रतिकार गरे। टाउकोमा गोली लागेपछि लादेन मारिए। लादेनसँगै उनका छोरा पनि मारिए। पाँच जना त्यहाँ मारिएको पाकिस्तानी अधिकारीले बताएका छन्। मारिएका मध्ये एक महिला छिन्। केहीलाई बन्दी बनाइएको छ। छापा मार्ने क्रममा एउटा अमेरिकी हेलिकप्टर प्राविधिक कारणले दुर्घटना भएको थियो। पछि त्यसलाई सुरक्षाको कारण जनाउँदै अमेरिकी सेनाले नै नष्ट गरिदियो।
अमेरिका किन खुसी छ ?
उसकै राष्ट्रपतिको शब्दमा एक दशक लामो युद्धले सफलता पाएको छ । बिन लादेन अमेरिकाको मोस्ट वान्टेडको सूचिमा नम्बर एकमा थिए । उनलाई खोज्न भनेर अमेरिकाले अरबौं डलर मात्र बगाएन । त्यसको बदलामा अफगानिस्तान र पाकिस्तानका हजारौं निर्दोषहरुको मुल्यहिन मृत्यु भयो । नसोचिएको तरिका अपनाएर लादेनले अमेरिकालाई नराम्रो झट्का दिएका थिए । उसले भन्ने गरेको उच्चतम् सुरक्षा संयन्त्रलाई बेकम्मा बनाईदिएका थिए । यसैले आफ्नो नागरिकको मृत्युको बदला भन्दा पनि बढि आफ्नो राजनीतिक र सामरिक सामथ्र्य पुष्टि गरेको छ भने उसको दशक लामो युद्धले सफलता हाशिल गरेको छ । यसैले पनि उ खुसी छ ।
अमेरिकाको बुझाईमा लादेनको मृत्युसँगै अलकायदाको शक्तिमा ह्रास आएको छ । अमेरिकाका लागि संसारभर खतराको मुख्य कारण बन्दै आएको अलकायदाको शक्ति क्षिण हुनु अमेरिका लागि अर्को ठुलो सफलता हो । यसैले पनि उ खुसी छ ।
ओबामाको पुष्टि भिडियोमा हेर्नुहोस्
के अलकायदाको शक्ति घट्यो त ?
यसका लागि एक वरिष्ठ अफगान आतंकवादविरोधी कार्यका अधिकारीको भनाई काफी छ । उनले बीबीसीमा अन्तवार्ता दिदै भनेका छन्, यो ९लादेनको मृत्यु० सन् २००४, २००५ वा २००६ मा भएको भए बढी महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला( अहिले त निकै ढिला भइसक्यो। अब त प्रत्येक सडकमा एक जना बिन लादेन छ । यसैले अलकायदाको खतरा अझ बढेको छ । उनीहरु यति धेरै शक्तिशाली भइसकेका छन् कि अब उनीहरुलाई लादेनको त्यती ठुलो अभाव नखड्किन सक्छ । अहमद रसिदले बीबीसीलाई भनेका छन्( अल कायदाको अहिलेको नीति एक मान्छे एक बम छ। अमेरिका र युरोपका सबवे वा रेल स्टेसनहरुमा आत्मघाती आक्रमणको खतरा निकै बढी छ। विमान अपहरण, पश्चिमी सैन्य केन्द्रहरुमा बम आक्रमण र मध्यपूर्वका अमेरिकी दूतावासहरुमा पनि आक्रमण हुनसक्छन्। सुपरमार्केटमा भर्खरको जिहादीले बम राखेर पड्काउन पनि सक्छ । यसैले संसारमा कोही पनि सुरक्षित छैन । अमेरिकाले नै उसका सबै नागरिकलाई सतर्कता अपनाउँन निर्देशन दिइसकेको छ । यसबाट पनि बुझिन्छ, अमेरिकामा खतरा अझ बढि रहेको छ ।
लादेनले गरेको काम घोर निन्दनिय त छदै थियो । उनले बाँचुञ्जेल जुन संरचना र विचारका लागि काम गरे त्यो आगामी दिनका लागि झन् बर्बर र भयानक हुनेछ । तर अमेरिकाले लिएको बाटोले यसको कुनै अन्त्य दिन सक्ने छैन । ओसामा बिन लादेन मारिए पनि उनको ठाउँ अलकायदामा पक्कै रित्तो नरहला । यसैले युद्ध र मात्र युद्धबाट समाधान खोज्नु भन्दा अरु कुनै उपायले संसारलाई आतकंवादबाट बचाउँने छ ।
Filed under: समाचार विश्लेषण |	7 Comments »